China 1000mm Inopisa Yakakungurutswa HRC Simbi Coil yemotokari fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Iyo HRC inopisa yakakungurutswa simbi coil imhando yesimbi coil iyo yakafara kupfuura kana yakaenzana ne600mm uye ukobvu i1.2-25mm.Inopisa yakakungurutswa yesimbi coil inogadzirwa neslab (kunyanya inoramba ichikanda slab) seyakabikwa, iyo inopisa uye inogadzirwa ne roughing mill uye yekupedzisa.
2.Kukora: 1.2-16mm, yakagadzirirwa
3.Width: 1000-2500mm, yakagadzirirwa
4.Coil Weight: 1.7 - 10MT kana sekukumbira kwako
5.Packing: Standard yegungwa-yakakodzera kurongedza
Zvinoenderana nezvakasiyana zvinhu uye zvivakwa, ivo vanogona kukamurwa kuita yakajairwa kabhoni structural simbi, yakaderera alloy simbi uye alloy simbi.
Zvinoenderana nemashandisirwo avo akasiyana, inopisa yakakungurutswa simbi coil inogona kukamurwa kuita inotonhora yekugadzira simbi, simbi yezvimiro, mota yekugadzira simbi, corrosion isingagadzike simbi yekugadzira, simbi yekugadzira, welded gasi silinda uye simbi yekumanikidza, simbi yepombi, nezvimwe.
Giredhi Standard EQUIVALENT
STANDARD & GRADE Application
GBT3274 JIS G3101, SS330, SPHC, SPHD Zviumbwa zvezvikamu
Zvigadzirwa zvinopisa zvakatenderedzwa zvesimbi coil zvine zvivakwa zvakanakisa senge kusimba kwepamusoro, kusimba kwakanaka, kugadzirisa nyore uye kuumba uye kunaka weldability, nezvimwe.
Musiyano uripo pakati pekupisa yakakungurutswa simbi coil uye inotonhora yakakungurutswa simbi coil:
Kupisa yakakungurutswa simbi coil chigadzirwa chakagadziriswa pamberi pebillet recrystallization.Cold rolled simbi coil ndiko kunotevera kugadzirisa kwe inopisa yakakungurutswa simbi coil.Huremu hwese hwesimbi coil hunosvika 15-30t.Kazhinji, ukobvu huri pamusoro pe 1.8mm.
Nekuti inopisa yakakungurutswa simbi coil ine yakanakisa zvivakwa senge kusimba kwepamusoro, kusimba kwakanaka, nyore kugadzirisa uye yakanaka weldability, saka inopisa yakakungurutswa simbi coil inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira maindasitiri senge ngarava, mota, mabhiriji, zvivakwa, muchina uye kumanikidza ngarava nezvimwe kugadzira. maindasitiri.Nekukura kuri kuwedzera kwematekinoroji matsva ekutonga akadai sekurongeka kwehukuru, chimiro uye kunaka kwepamusoro kwesimbi inopisa yakatenderedzwa coil uye kuenderera mberi kwekubuda kwezvigadzirwa zvitsva, zvinopisa zvakakungurutswa zvesimbi coil zvigadzirwa zvakashandiswa zvakanyanya uye zvinowedzera kukwikwidza mumusika.